बहुराष्ट्रिय सेना सित भिडन्त हुदा २२ जनाको घटनास्थमै मृत्यु, कसरी घट्यो घटना ? — Imandarmedia.com
बहुराष्ट्रिय सेना सित भिडन्त हुदा २२ जनाको घटनास्थमै मृत्यु, कसरी घट्यो घटना ?
एजेन्सी। भर्खरै सेना सित भिडन्त हुदा २२ जनाको घटनास्थमै मृत्यु भएको छ। बोको हराम विद्रोहीका विरुद्धमा यहाँस्थित बहुराष्ट्रिय सेनाले गरेको कारबाहीका क्रममा परी कम्तीमा पनि २२ जना विद्रोही मारिएका छन्।
यहाँ भएको पछिल्लो कारबाहीमा २२ जना बोको हरामका लडाकू मारिएको नाइजेरियाली सेनाले जानकारी दिएको छ। बोको हरामका विरुद्धमा यहाँको सेनाले पछिल्ला केही दिनयता कारबाही जारी राखेको छ।
यसरी मारिएकामध्ये अधिकांश हवाई तथा स्थल कारबाहीमा परेका हुन्। नाइजेरियाको रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार ती लडाकूहरु नाइजेरियाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित बोर्नो राज्यमा भएको कारबाहीमा परेर मारिएका हुन्।
पश्चिमी अफ्रिकी नेताहरुले केही महिना अघि नाइजेरियाली इस्लामिस्ट समूहले लेक चाड क्षेत्रमा गरेको हिंसात्मक हमला र हत्यका विषयमा छलफल गरेका थिए।
सो क्षेत्र नाइजेरिया, चाड, क्यामरुन र नाइजरको सीमा क्षेत्रमा पर्दछ। सो क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा बोको हरामका लडाकूहरु मारिएको समाचार आएको छ।
यस पटकको यो कारबाही उक्त लेक चाड क्षेत्रमा नै बढी मात्रामा केन्द्रित भएको बताइएको छ। यो कारबाही रक्षात्मक रुपमा भएको नाइजेरियाली सेनाले जनाएको छ। यहाँको सेनाका अनुसार सो कारबाही जारी रहेको छ।
त्यस्तै, इस्लामिक स्टेट्स आइएस समूहले आइतवार अफगानिस्तानको राजधानीमा एक महिलाको मृत्यु हुने गरी यात्रुबसमा भएको बम आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ।
हालै जारी रहेको रमजान उपवास महिनामा गएको दुई हप्तायता भएका घातक आक्रमणहरूमा परी दर्जनौं व्यक्ति मारिनुको साथै घाइते भएका समाचारमा जनाइएको छ।
राजधानी काबुलमा भएको बस आक्रमणमा परी एक महिलाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य तीन जना घाइते भएका यहाँँको प्रहरीले जनाएको छ। गत शुक्रबारको मस्जिदमा भएको बम विष्फोटको जिम्मा कुनै समूहले लिएको छैन।
तर बसमा भएको आक्रमणको जिम्मेवारी आइएसले लिएको छ। विशेष गरी सुन्नी बहुल्लता रहेको स्थानमा अफगानिस्तानको अल्पसंख्यक शिया र सुफी समुदायहरूलक्षित हालैका हप्ताहरूमा भएका बम विस्फोटनलगायतका आक्रमणहरूको,
आइएस समूहले दाबी गर्दै आएका छन्। तालिबान अधिकारीहरूले आफ्नो सेनाले आईएसलाई पराजित गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर विश्लेषकहरूले जिहादी समूह प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको बताउँदै आएका छन्।
रुसविरुद्ध लड्न युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका एक अमेरिकी नागरिकको रुसी सेनाको आक्रमणमा मृत्यु भएको छ। सीएनएनका अनुसार २२ वर्षका विली जोसेफ क्यान्सलको रुसको कारवाहीमा मृत्यु भएको उनका परिवारले पुष्टि गरेका छन्।
उनी यसैहप्ताको सोमबार युक्रेनमा मारिएका हुन्। जासेफका आमा रेबिकाका अनुसार युक्रेनमा रुसविरुद्ध लडेबापत् उनले पैसा पाउँथे।
जोसेफ अमेरिकाको टेनिसीको भाडाको सेनालाई अभ्यास गराउने कम्पनीमा आवद्ध थिए। युक्रेनले इच्छुकले युक्रेनी सेनामा भर्ती हुन पाउने व्यवस्था गरेपछि जोसेफ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै युक्रेन गएका थिए।
यससँगै रुस–युक्रेन युद्धमा मारिने अमेरिकी नागरिकको संख्या दुई पुगेको छ। यसअघि अर्का अमेरिकी पुरुषको पनि प्रेमिका भेट्न जाँदा युक्रेनमा मृत्यु भएको थियो।
त्यस्तै, रुसविरुद्ध लड्न युक्रेन पुगेका बेलायती नागरिक स्कट सिब्लीको मृत्यु भएको छ। यस्तै अर्का एक बेलायती नागरिक भने बेपत्ता रहेका छन्। बेलायतको विदेश मन्त्रालयले युक्रेनमा स्कट सिब्लीको रुसी आक्रमणमा मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सिब्ली युक्रेनमा मारिएका पहिलो बेलायती नागरिक हुन्। अर्का बेपत्ता रहेका नागरिकको बारेमा भने बेलायतले थप जानकारी दिएको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार ती दुई बेलायती नागरिक विदेशी स्वयंसेवकको रुपमा युक्रेन पुगेका थिए। यद्यपी सिब्लीले युक्रेनी सेनाको कम्ब्याट लगाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। उनीहरु मारिउपोल र डोन्बास जस्ता युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पुगेको बताइएको छ। बीबीसी